Plug-in AMP miaraka amin'ny fanohanan'ny IFrame - MG
Plug-in AMP ho an'ny pejy misy IFrames
Ny mpamorona pejy haingam-pandeha haingam-pandeha (AMP) amin'ny famoronana pejy Google AMP , ny plugins AMP ary ny mpamorona tag AMPHTML dia misy fiovam-po iframes mandeha ho azy ho lasa tag <amp-iframe>.
<amp-iframe> fampidirana tag
Ny Generator finday haingam-pandeha dia mamantatra avy hatrany raha misy iframe nampidirina ao amin'ny pejinao manokana ary mamadika ireo iframana hitany ho tag <amp-iframe>.
Amin'izao fotoana izao, AMPHTML dia mamela ny famoahana atiny misy fifandraisana HTTPS manan-kery ihany!
Ny Generator finday haingam-pandeha dia manamarina avy hatrany raha toa ka azo tratra amin'ny alàlan'ny fifandraisana HTTPS voahidy ny URL ampiasaina ao amin'ny iframe Mba hanaovana izany, ny Accelerated Mobile Pages Generator dia nanakalo ny 'HTTP' ho 'HTTPS' ao amin'ny URL fotsiny. Raha azo sokafana amin'ny HTTPS ny URL, ny mpamorona pejy finday haingam-pandeha dia mamadika ilay iframe ho lasa tag 'amp-iframe' mifanentana ary manome ny atiny iframe amin'ny kinova AMPHTML.
Raha tsy azo alefa HTTPS ny URL, ny atiny iframe dia tsy azo aseho mivantana amin'ny kinova AMPHTML. Amin'ity tranga ity, ny Accelerated Mobile Pages Generator dia mampiseho an'ity sary ity:
Amin'ny alàlan'ny fanindriana an'ity sary ity dia afaka manokatra ny atiny iframe ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny 'fifandraisana HTTP' tsy voahidy. Amin'izany fomba izany, ny atiny IFrame dia azo idirana farafaharatsiny amin'ny alàlan'ny vahaolana hafa ary tsy jerena tanteraka.